Ukuqhekeka kweMacOS kukhulu kunokuba ucinga | Ndisuka mac
Inkqubo yokusebenza yeeMacs zethu yahlulwe phakathi: MacOS Sierra, Capitan, Mavericks, Yosemite, njl. Oku kuthetha ukuba ayizizo zonke iiMacs ezisebenzisa inkqubo yokusebenza yamva nje. Kwelinye icala, oku kunokuba ngenxa iimfuno zekhompyutha: Iikhompyuter zethu ziyakwazi ukuhlala iminyaka emininzi zikhuphisana, kodwa zisebenza ngcono nge-OS eyayiyilwe ngayo. Ngubani ongakhange awenze okanye owaziyo, iMac edlulisele ebantwaneni babo, abazali okanye ilungu losapho elisondeleyo kwaye lo msebenzisi mtsha uyavuya ngesi sipho. Kwelinye icala, Kukho elinye iqela labasebenzisi eliguqulela ii-macOS ezindala ezinokuthenjwa ngakumbi.
Yiba njalo, iphepha StatCounterUqhubekile nesifundo sokuqhekeka kweMacOS ngokusekwe kutyelelo kwiphepha laso. Ummangaliso ophambili linqanaba lokwamkelwa kweMacOS ePhakamileyo yeSierra. Inkqubo ka-Apple yasungulwa kwinyanga ephelileyo ngoku, uku-5,6% kuphela yeeMac ezityelele iphepha. Namhlanje, IMacOS Sierra yeyona nkqubo isetyenziswayo phantse sisininzi sabasebenzisi, ngakumbi i-48%. Ilandelwa ngu-El Capitan kwi-21,75% kunye ne-Yosemite nge-14,41%. Kwindawo yesihlanu yiMacOS ePhakamileyo yeSierra, eboshwe namhlanje ngeMaverick. Basese nostalgic kwi-Snow Leopard, abahlala kwinxalenye eseleyo yesitudiyo.
Ewe kuyinyani ukuba, Abasebenzisi abaninzi balinde uguqulelo x.1 yayo nayiphi na inkqubo yokusebenza, ngaphambi kokuthatha umtsi. Abanye balinde uguqulelo lokugqibela lwezicelo zabo ezibalulekileyo, khawucinge ngokuhlaziya kwaye bangabinakho ukusebenzisa usetyenziso olufanelekileyo lomsebenzi obalulekileyo.
Nangona kunjalo, sisifundo esinye. ICarbon Copy Cloner ifunyenwe kwiveki ephelileyo, ukuba yi-25% kuphela yabasebenzisi besicelo sakho abasebenzisa iMacOS ePhakamileyo yeSierra. Eli nani liphezulu kunophononongo lwe-Statcounter kwaye ngaphambili kwangoko.
Nangona kunjalo, la manani kufuneka athelekiswe nokwamkelwa kwezinye iinkqubo zokusebenza, ngaxeshanye. Ngale ndlela, siza kubona ukwamkelwa kwenyani kweMacOS ePhakamileyo yeSierra phakathi kwabasebenzisi.
Phakathi kwezizathu zokungahlaziyi, sinokufumana kwakhona inkqubo yefayile entsha ye-APFS, enokuthi icothise abasebenzisi, ngokunxulumene nokusebenza kwayo.
Nokuba kunjalo, kuhlala kufanelekile ukuba uhlaziye kuhlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza exhaswa ngumatshini wakho, ngaphandle kwemfuno ethile. Ukongeza, iimvavanyo ezenziweyo, kunye neengxelo zabasebenzisi, zibonisa inkqubo eqinileyo nezinzileyo, kwaye ke, i-100% isebenza ngokukuko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukuqhekeka kweMacOS kukhulu kunokuba ucinga
Edelmiro González sitsho
Kule Apple kufuneka ufunde kwiMicrosoft, iPC ukusuka kwiminyaka eli-10 eyadlulayo oyifakayo Windows 10 kwaye ihamba ngokungathi kukudubula. Ngokuchasene noko kweCupertino.
Akukho nto unokuyithetha nge-Iphone kunye ne-iPad, ngalo lonke ixesha bekhupha ingxelo entsha ye-IOS, kubonakala ngathi inesicwangciso esenzelwe ukugqitha ukuphelelwa lixesha.
Phendula uEdelmiro González
Ngaba kungenxa yokuba i-OS entsha yibhanki yehagu? I-Snow Leoprad yayintle, ayizange inike ngxaki, ngoku nge-Sierra ephezulu kubonakala ngathi bathatha iintlungu ukwenza ii -apps zingahambelani ne-OS, i-Starcraft ayisasebenzi, iyadana